महामारीमा कालोबजारीः मूल्य चढ्यो आकाश, निचोरिँदै जनता – Bikash Khabar
आइतबार, ०९ जेठ २०७८ गते ८:२६ मा प्रकाशित	Author विकास खबर संवाददाता	Comment(0)	216 Views
काठमान्डाैं / अघिल्लो वर्षको लकडाउनमा राजधानीमा तरकारीकाे मूल्य निकै घटेको थियो ! सर्वसाधारणले यसपालि पनि त्यही सोचेका थिए ! तर, भयो उल्टो ! यसबीच उपभोक्ता ठग्न पल्किएका कालो बजारियाले यसपालि साबिकभन्दा बढाएका छन् !
निषेधाज्ञापछि स्वास्थ्य उपचार, औषधि, दैनिक उपभोग्यका सामग्री खाद्यान्न, इन्धन, तरकारीलगायतमा चर्को मूल्यवृद्धि गरी आम उपभोक्तालाई सकेसम्म यस्ता समूहले उखु निचोरेजस्तै निचोरेका छन् ! सरकारको कमजोर नीतिका कारण बजारमा यस्तो अवस्था सिर्जना भएको उपभोक्तावादीहरूले औंल्याएका छन् !
विवादमा महन्थ ठाकुरनिकट राजकिशोर र अमृताले ठाकुरलाई साथ दिएनन्
काठमान्डौं,१७ असार । जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिताको विवादमा महन्थ ठाकुरनिकट मानिएका दुई कार्यकारिणी सदस्य राजकिशोर यादव र अमृता अग्रहरिले ठाकुरलाई
१४ पुष,काठमाडौँ । नेपाल सरकारले तमु ल्होसारका अवसरमा बिहीबार ९पुस १५ गते० सार्वजनिक बिदा दिएको छ । नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को आज
सामान्य लक्षण देखिदैमा परीक्षण गर्न चिकित्सकको सुझाव